Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya oo ku guul darraystay in ay xalliyaan khilaafka Siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan. – Soomaali 24 Media Network
Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya oo ku guul darraystay in ay xalliyaan khilaafka Siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan.
Posted on March 31, 2021 Leave a Comment on Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya oo ku guul darraystay in ay xalliyaan khilaafka Siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan.
Xubnaha beesha caalamka ayaa laga soo xigtay in ay ka daaleen u kala dabqaadidda hoggaamiyayaasha Soomaalida, iyaga oo taagan halkii ugu danbaysay oo ay go’aankooda kama danbaysta ah ugu gudbin lahaayeen golaha amaanka ee Q/midoobay si ay qaraar uga qaataan arrimaha Soomaaliya.
← Kulankii Baarlamaanka oo maanta qasoomay, muxuuse yahay Ajanduhu?.
Taliya Xoogga Dalka Soomaaliya iyo taliya howlgelinta midowga yurub oo kulan ku yeeshay Muqdisho →